Malunga nathi -Staba Electric Co., Ltd.
Nika uluhlu olupheleleyo lweemveliso
uluhlu olupheleleyo lwe-AVR, i-UPS, i-Inverter kunye neTransformers
Amalungelo awodwa omenzi wechiza angaphezulu kwama-20 kwihlabathi liphela kwiimveliso zamandla
Ukuthengisa ngaphezulu kwamazwe angama-60 kunye neendawo, ezinconyelwe ziimpawu ezaziwayo
Usetyenziso olu-5 oluphezulu
Abenzi abaphezulu aba-5 beemveliso ze-AVR e-China abasebenzi abangama-350, indawo yokuvelisa engama-40,000 exhotyiswe ngezixhobo eziphambili
Umgangatho oqinisekisiweyo kunye nokuHanjiswa
Inkampani ISO9001: 2015 & IMPS GB / T29490-2013 eqinisekisiweyo yenkqubo yeQC kunye nolawulo
I-Staba Electric Co., Ltd.. yasekwa ngo-2010, ibekwe e Zhongshan, China-hub zokuhamba Guangdong-Hong Kong-Marco Greater Bay Area. I-Staba ngumenzi ophambili kolu shishino kunye nodumo lwe-OEM lwehlabathi kwizisombululo zombane nezolawulo zombane. Ezona mveliso zethu ziphambili sisiQinisekiso seVoltage ezenzekelayo (i-AVR), iiMbane eziNgenakuphazanyiswa (i-UPS), ii-Inverters / iiSolver Inverters, iiMotors ze-DC ezincinci kunye neziPhakathi, ezilawulayo zeemodyuli zeBLDC, njl.
I-Staba ine-43,000 sqm yomzi-mveliso owakhiwe ngokwakho, eneqhosha eliphambili lezixhobo zemveliso ezibandakanya:
-Ukusebenzisa izixhobo zekhabhathi yensimbi kunye nomasifundisane wokunyathela,
-Ukuguqula into engundoqo yentsimbi kunye nokufakwa kumasifundisane,
-ITransformer yokubhijela kunye nokuvavanya umasifundisane,
Ukucwangciswa kwePCB kunye nokuvavanya,
- I-BLDC yocweyo lweemoto,
Iimveliso zonikezelo lwamandla kwindibano yokugqibela kunye novavanyo lokusebenzela.
Imveliso yonyaka ifikelela kwi-50 yezigidi. Iimveliso zethu zithengiselwa kumazwe angaphezu kwama-68 kunye nemimandla kwihlabathi liphela Uninzi lwabathengi bethu abaphambili ziimpawu ezaziwayo kwihlabathi. Kwi-2019, uStaba wakhethwa njengeshishini lesampulu kwiNkcazo yeSizwe yeNkokeli yokuthumela ngaphandle.
Ngexesha lophuhliso, uStaba uhlawula kakhulu ukuqokelelwa kwamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kunye nokusekwa kwenkqubo yolawulo lwendibaniselwano. I-Staba lishishini lokuqala kwingingqi yethu ukupasisa ukuvunywa kwe-IPMS ye-GB / T29490-2013, ephethe amalungelo awodwa omenzi wechiza oqobo e-United States nakwi-European Union, nangaphezulu kwama-58 oqobo lobunikazi be-China kunye neemodeli zelungelo lobunikazi. Ukusukela ngo-2014, iStaba samkelwe / samkelwa kwakhona njengeshishini lesizwe eliphezulu lobuchwephesha amaxesha amathathu alandelelanayo, sinamaziko amabini obuchwephesha: Iphondo laseGuangdong iZiko lobuGcisa boBunjineli boMbane, kunye neZhongshan Power Product Engineering Technology Centre. Ukusukela kusuku lokuqala lokusekwa kwayo, inkqubo yesoftware ye-ERP kunye nenkqubo yolawulo ye-ISO9001 ziye zaphunyezwa kuzo zonke iinkalo zolawulo lwenkampani, kuqinisekisa ukusebenza ngokutyibilikayo nangokufanelekileyo kwenkqubo. Okwangoku sinabasebenzi abangama-340, abangama-33 kubo bakwinkqubo ye-R & D kwaye abangama-38 bakwinkqubo yolawulo lweshishini. Kwangelo xesha, sinentsebenziswano enkulu kunye nentsebenziswano yokubonisana namaziko ophando amaninzi kunye neengcali kolu shishino, sizama ukwenza iimveliso zethu, iinkonzo kunye netekhnoloji phambili kwicandelo.
I-Staba yinkampani eqhutywa lixabiso, enexabiso eliphambili lokusebenza ngokukuko, ukutsha kunye nokujolisa kubathengi. Ngokuchanekileyo kungenxa yokusebenza okuphezulu apho uStaba anokufumana khona umvuzo ongaphezulu koontanga bakhe ukuze izixhobo kunye nenzuzo eninzi ityalwe kwi-R & D ukuze inzuzo ephambili yeStaba ikhuselwe ukuze igcineke; Ukuyila kukhathalelo lwabantu, konke ukukhuthazwa kwe-Staba kuvela ekuncedeni abachaphazelekayo ukuba bazigcine njani izixhobo kwaye bazive bhetele kwiinkqubo zoyilo-imveliso-ijelo-unxibelelwano nomthengi; ejolise kubathengi ibonisa imeko kaStaba malunga nenkonzo kunye nobushushu benkonzo kuzo zonke iinkqubo.
Siphe nje uluvo kulawulo lweemoto kunye nemoto, siya kukubonelela ngeseti epheleleyo yezisombululo kunye nemoto efanelekileyo oyifunayo. Sijonge phambili ekusebenzisaneni nawe!
Qala njengefektri encinci, jolisa kwiVoltage Stabilizer & UPS
Umthengisi oqinisekileyo weSole yePepsi Cola yeVoltage Stabilizer
Umasifundisane omtsha wama-8,000 m² Kugqityiwe ukuqinisekiswa kwe-ISO9001 Kusungulwe udonga lwe-1st slim wall mount Voltage Stabilizer
I-Granded China yesizwe se-Hi-tech Enterprise iqinisekisiwe
Ibekwe njenge-China ephezulu ye-5 yomvelisi we-Voltage Stabilizer
Kwaziswa uhlobo lwe-Triac Voltage Stabilizer
Qala ukwakha ipaki yemizi-mveliso engama-40,000m²
I-Guangdong yeZiko loPhando lweTekhnoloji yoNjineli eNamandla eNzululwazi
I-Staba Industrial Park isetyenzisiwe, amandla emveliso aphindwe kabini.
Inkqubo yolawulo lwamalungelo obunini bokushicilela i-GB / T29490- 2013 iqinisekisiwe
ICandelo leeMoto leStaba BLDC elisekwe
Inkampani yePCBA kunye neZinto eziSombulula iiNdlu ezincinci isungulwe
Imoto, Ivacuum yococa, I-BLDC yeFan Motor, Imoto yeBLDC, I-DC engenazithuthi, I-Brushless Motor, yophando pricelist